मृत्युसँग लड्दै बझाङ देउराका ओलक राई, सहयोगको अपिल - Everest Dainik - News from Nepal
मृत्युसँग लड्दै बझाङ देउराका ओलक राई, सहयोगको अपिल
कर्ण धामी, बझाङः विश्व महामारीरुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण अहिले देश लकडाउनमा छ । डेढ महिना लामो लकडाउनका कारण विभिन्न सरकारी तथा निजी सवारीका साधन ठप्प जस्तै छन् ।
मानिसहरू घरभित्रै थुनिएका छन् । आवतजावत गर्न गाह्रो छ । अत्यावश्यक कामका लागि यातायातका साधन खुला भए पनि भनेको समयमा पाउन सकिएको छैन । लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी विपन्न, दैनिक मजदुरी गरि साँझ/बिहानको छाक टार्ने वर्ग प्रभावित भएका छन् ।
यसैबीच लकडाउनले गर्दा जिल्लाको केदारस्यु गाउँपालिका-१ देउरामा बस्दै आएका ओलक राई पनि प्रभावित भएका छन् ।
उनी लामो समयदेखि विरामी छन् । १५ बर्षदेखि देउरामा बस्दै आएका उनी औषधि उपचार नपाएर मृत्युसँग लडरहेका उनलाई लकडाउनले झन् समस्या थपेको छ । उनको घर रामेछाप कुमा कुण्ड गाउँपालिका–४ हो । उनी कामको सिलसिलामा १५ बर्षअघि बझाङ आउका थिए । कामको खोजीमा यहाँका आएका राई अहिले प्यारालाइसिसले थला परेका छन् । ६ वर्षदेखि प्यारालाइसिससँग लडिरहेका राई अहिलेसम्म पनि ओछ्यानमै छन् ।
कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्नसरकारले लकडाउन गरेसँगै उनलाई औषधि ल्याउन समस्या भएको छ । सदरमुकाम चैनपुर, जिल्लाकै सुनकुडाबाट वैद्यको औषधि प्रयोग गर्दै आएकामो अहिले समस्या भएको राईले दुःखेसो पोखे । गाडी नचलेकाले औषधि ल्याउन निकै समस्या भइरहेको उनी श्रीमतीले बताइन् ।
६ वर्षअघि मध्यराती शौच गर्न घर बाहिर निस्केका राई एक्कासी लडेर बेहोस भएका थिए । बेहोसपछि होसमा आएपछि न हातखुट्टा नत शरीरका अन्य भाग नै चल्न थाले । यस्तो शारिरीक समस्या आएपछि उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल धाए पनि निको नभएको राइले बताए । ‘हातखुट्टा चल्दैन के गर्नु? मलाई पनि तपाईं कै जसरी हिाड्न मन थियोे’, उनले भने, ‘छोराछोरी सानै छन् कसरी हुर्काउने? छिट्टै मरिन्छ की भन्ने डर छ ।’
बुबालाई नेपालका विभिन्न अस्पतालमा लगे पनि उपचार हुन नसकेको उनकी छोरीले बताइन् । ‘धेरै ठाँउ धायौं । तर, रोग निको भएन’ राईकी श्रीमतीले भनिन्, ‘अब उपचार गरौँ भने पैसा पनि छैन ।’
मृत्युसँग लडिरहेका राईको अझ धेरै बाँच्ने इच्छा बोकेका छन् । तर, उपचारका लागि आर्थिक समस्या छ । ‘अझै यो संसारमा बाँच्न चाहन्छ । तर, आफ्नो आर्थिक हैसियत कमजोर छ’, उनले भने, ‘कसैले सहयोग गरे केही राहत महसुस हुने थियो’
ज्यालामजदुरी गरेर घरगुजरा चलाउने राईको परिवार लकडाउनले थप समस्यामा परेको छ । उनको परिवारको आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै केदारस्यू गाउँपालिकाले केही समयअघि राहतस्वरूप ३० किलो चामल २ किलो दाल, १ लिटर तेल र १ किलो नुन वितरण गरेको थियो । ठूलो परिवार भएका कारण गाउँपालिकाले सहयोग गरेको सो राहत सक्किँदा फेरि राई परिवार मनकारी व्यक्तिको खोजीमा छ ।
डेढ दशकदेखि भाडामा बस्दै आएका राईको परिवारलाई धेरै जटिल समस्या परे गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने अध्यक्ष इन्द्र भण्डारीले बताए । प्यारालाइसिस पीडित राईलाई सहयोग गर्न चाहनेले ९८६५८७०४५६ मा फोन गरेर बुझ्न सक्नु हुनेछ ।
ट्याग्स: ओलक राई